कहिले चाटिरहुँ जस्तो बेहिसाब मीठो
कहिले बेपत्तै तीतो टर्रो
घ्यार्‍ररररर घिसारिरहेको ??
बाँच्नुको तातो खोज्दै गर्दा
तिमी मसँग टिपिक्कै टाँसिएर बसिरहेका हुन्छौ
त्यतिखेर त तिम्रो मुखै कोपरेर बिरुप पारीदिउँ जस्तो लाग्छ!!
सुटुक्क हेरफेर गर्दै 'भोली' को सपना देखाइदिन्छौ,
मीठा गुलिया सपना!
जानिजानी आवरणभरि मह दलेर
आँशुका भेलको पहिलो साक्षात्कार तिमीसँगै हुन्छ ,
सान्निध्यता पनि तिमी सँगै हुन्छ ,
हेर मलाई तिमीसँग इर्ष्या लाग्छ इर्ष्या !
भन मलाई कहाँबाट यहाँ ल्यायौ र किन?
अनी कहिलेसम्म यहाँ म तिम्रो औँलिमा नाच्नुपर्ने हो??
तिमी बोलि बोली केहि बोल्दैनौ
अनी नबोलेरै के के भनिसक्छौ,
बेला न कुबेला खग्रास ग्रहण निम्त्याइदिने तिमी
कहिले बेपत्तै तीतो टर्रो ह्वाल्ह्वाली छाद्नु जस्तो